Indoda ka-Aquarius | Iimpawu zabantu base-Aquarius othandweni, ebhedini, ukuthandana kunye nobudlelwane | Iimpawu zeZodiac - Iimpawu Zezodiac
Indoda ye-Aquarius Iimpawu zayo kuThando, iBhedi, kunye noBomi
Ke, uwe kwindoda yeAquarius. Siyavuyisana nazo zilungile kuba ngokuqinisekileyo ubeka isilumko! Ewe, umfo wakho we-Aquarius unengqondo enomtsalane. Yiyo loo nto, kutheni isiqubulo sakhe esithi 'NDIYAZI.'
Mhlawumbi bubuntu bakhe obukhanyiselweyo obukutsalelayo kwasekuqaleni. Ngaphandle kwamathandabuzo xa ujonga emehlweni akhe ubona inkosi yesilumko apho amanye amadoda angamaZodiac engabonakali ngathi anayo.
Iimpawu zakhe kuThando, iBhedi, kunye noBomi
Ndibetha ukuba akwenze uzive ngathi angakubona okudlulileyo, okwangoku kunye nekamva konke ngaxeshanye.
Xa ejonge ngakwicala lakho, uziva ngathi ujonge ngapha nangapha kwakho, ugqithile kwisitya sakho somzimba kwaye ubona umphefumlo wakho! Ngaba ukwenza ube neentloni? Ewe kunjalo!
Ewe, ukuba uwe nzima kwi-Aquarius eyindoda, uya kuhambo olunye lwasendle. Emva kwayo yonke loo nto, indoda ka-Aquarius ihlala entlokweni yayo kwaye ihlala iza nezinto ezintsha kunye nemibono yasendle-ngaphakathi nangaphandle kwegumbi lokulala!
Ke, umbuzo uhleli: Ngaba ukulungele ukuthandana nomntu onokuthi ahambe ashiyeke aze asondele kakhulu kwimizuzwana emi-2,5?
Itheyibhile yomntu ka-Aquarius
Uyitsala njani indoda yeAquarius
Ukuthandana nomntu wase-Aquarius
Impembelelo yeplanethi kaSaturn inyanzela indoda yakwa-Aquarius ukuba idlule kwiintlungu ezithile ezikhulayo kwaye, ngexesha lobuntwana bayo, kuye kwafuneka ijongane namaqhinga okuba ngumzali onegunya, imiceli mngeni, imiqobo, izithintelo ezingqongqo, kunye nezithintelo ezingafunekiyo. Indoda ka-Aquarius ifundiswa izifundo zobomi ngokungathi ifunda ngamava kunye nenkumbulo ephindaphindwayo- uyakusiphinda isifundo esinye ephindaphinda de ekugqibeleni akwazi ukusilawula. Ngaba wakha weva 'ngesikolo sokunkqonkqoza nzima?' Indoda ye-Aquarius lilungu lobomi bonke, ke yigcine engqondweni le xa unxibelelana nayo. Uhlawule amatyala akhe, wazabalaza kwimiceli mngeni emikhulu, kwaye uphakamile ngaphaya koloyiko.
Indoda ka-Aquarius ligorha kunye neentshatsheli zobomi bakhe. Leyo yeyona mfundiso iphambili yempembelelo yakhe (uSaturn) - ulawulo olupheleleyo malunga nenyani yakhe. Ke, la mandla eplanethi anokunceda indoda yakwa-Aquarius ukuba iphuhlise ukuzithemba ngokuphumelela ngempumelelo, nokuba ngaba imiceli mngeni ayoyisayo yeyokomoya, yokomoya, yomzimba, yezemali, okanye yonke le yokugqibela.
Uvavanyo kunye nempazamo ligama lomdlalo xa kufikwa kwindoda ye-Aquarius kunye neendlela zakhe zokufunda- ethi, kumphezulu ubonakale ngathi yindlela engathandekiyo yokufunda. Nangona kunjalo, le nto ivumela i-Aquarius eyindoda ukuba iqonde kwaye igcine la mava amfundisileyo. Ngokuhamba kwexesha, ukhula kwinqanaba lokuxabisa kunye nombulelo wokufumana ubulumko obuninzi kunye nokuqonda ngezi zifundo zobomi.
Indoda ka-Aquarius iye iqonde ukuba ngokubandezeleka uyafunda kwaye uyakhula kwaye uyayiqonda indlela izifundo zobomi ezimila ngayo namhlanje. Ngokukhanya okungalunganga, umzabalazo oqhubekayo wendoda engu-Aquarius unokuyishiya iziva ingazithembanga malunga nokhetho lobomi kunye nekamva layo.
Olu phawu lweZodiac lunokuphuhlisa umba ngokuzithemba, kwaye unokuzibona eqhubeka nokuzithelekisa nabanye ukulinganisa ukuba uphi ebomini bakhe nalapho acinga ukuba kufanele ukuba ubekhona. Ukulinganisa rhoqo kwakho kwabanye kunokubonakalisa kwimizamo eqhubekayo kunye neqhubekayo 'yokugcina i-Joneses.' Impembelelo yeSaturn egqithisileyo kwi-Aquarius Man isenokumenza abonakale ephantse abe nguzwilakhe.
Indoda ka-Aquarius ethandweni naseBhedini
Nangona uthathelwa ingqalelo ngokungathi ngumhlobo omangalisayo kwaye owenza ubuhlobo ngokulula, xa kufikwa ekuthandeni, kuyafana neAquarius Man iyawa, akukho kukhubeka kwindawo yonke. Ngandlel 'ithile ikude kwaye incinci kwicala elingathandekiyo, Indoda ye-Aquarius ngamanye amaxesha kunzima ukuyifumanisa ngoko ayifani neqabane ukubuza ukuba ithini na intliziyo yakhe, okanye ukuba unyanisekile xa kusiziwa ekuvakaliseni imbono yakhe. Indoda ye-Aquarius ayisiyonto inomdla wokubonisa uthando olukhulu. Bayayithanda indawo yabo yobuqu kwanaxa benobudlelwane kwaye xa umntu ewela imida yendawo u-Aquarius Man uziva ngaphandle kweentlobo.
Kukho isigqebelo apha ekubeni Indoda ye-Aquarius ihlala iheha umntu obhinqileyo othanda imiboniso yothando esidlangalaleni nophantse abe nothando olukhulu. Ingathi batsalelekile kwabo baneempawu abangenazo ukuze bakwazi ukufikelela kulungelelwaniso olugqibeleleyo kubudlelwane. Yiyo loo nto indoda engu-Aquarius kuya kufuneka ihlengahlengise iqabane elinothando ngakumbi nangokuchaseneyo. Ukuze uhambelane ngokwenyani ne-Aquarius Man, nangona kunjalo, iqabane akufuneki ukuba libe nomtsalane kwaye lonwabe kuphela kodwa likwanengqondo ekhuphisana neyalo. Ukuba awukwazi ukuvuselela ingqondo yakhe, awuyi kuyiphumelela intliziyo yakhe.
Iimpawu zomntu ze-Aquarius, Ubuntu, iimpawu
Ukuba usebudlelwaneni (okanye ufuna ukuba) nendoda ye-Aquarius, uzifumanela uhlobo lomfana okhaliphileyo! Kuyo yonke imiqondiso ye-12 ye-zodiac, indoda eyi-Aquarius yeyona nto iphambili malunga nokucinga kwangaphambili, izinto ezintsha, ukuqhubela phambili kunye nobukrelekrele. Ngamanye amaxesha indoda yakho inokubonakala ngathi ikho 'konke entlokweni yayo okanye ilahlekile kwiingcinga zayo; Amadoda ama-Aquarian ziingcinga ezinzulu ezikonwabelayo ukuxhaphaza iifomyula, ithiyori kwaye zichitha ixesha elininzi zingene kwiingcinga ezingabonakaliyo. Xa ucinga nge-Aquarius cinga ngegama eliphambili: 'Ndiyazi.' Uthando lweGeminis lufuna ulwazi, kodwa yi-Aquarian eqonda ukuba ulwazi alunto ngaphandle kwesicelo sobulumko.
Zilungiselele: Nangona uphawu lwe-Aquarius luhambelana nomoya, ohambelana ngqo nengqondo kunye neenkqubo zokucinga zomntu wakho, ukwangqinelana nomba wamanzi. Yinyani; Umgcini wamanzi luphawu lwe-Aquarius, kwaye kakhulu njengamanzi, indoda yakho yase-Aquarian inokuhamba kwaye inzulu. Ngokunjalo, akho amaxesha apho anokufumana khona njenge-eccentric, okanye evukelayo, eguqukayo, kwaye engaqhelekanga.
Njengamanzi, indoda ka-Aquarius iyakwazi ukuziqhelanisa, inokuhamba nokuhamba, kwaye ngamanye amaxesha inokubonakala ngathi ayinakuze ibe nakho ukubambeka kwinqanaba lokungazinzi. Uyakufumana indoda yase-Aquarian ikwazi ukoyisa imida ngokungathi inesiphiwo sokufumana indlela ejikeleze imiqobo. Ukunxibelelana kakhulu nezinto zamanzi kunye nomoya, indoda yase-Aquarius ibonisa ukuba nobuhlobo, inobuhlobo, kwaye iyathandeka, kodwa kukho amaxesha apho inokuba nayo i-moody, inamandla kwaye ibonakalise.
Kuba indoda yakho yase-Aquarian iyahambelana nezinto zomoya, oku kufuneka kugcinwe engqondweni xa ucinga ngendawo yakhe efanelekileyo yokuhlala. Iindawo ezininzi ezivulekileyo, amagumbi amakhulu, iisilingi ezinde, iifestile ezinkulu, namagumbi amaninzi… amagumbi amaninzi, angcono… le yeyona ndawo yokuhlala indoda yaseAquarius, kwaye akasayi kuba nangxaki yokwenza ikhaya eliphangaleleyo libe yindawo yakhe engcwele. Ngoku, ngenxa yokuba indoda ka-Aquarius inandipha zombini izitayile zakudala kunye nezezixhobo zangoku, sukumangaliswa ukuba ngaphakathi endlwini kukhangeleka ngathi intengiso yeempahla ihambile, ezinye izinto zeediliya, ezinye iziqwenga zangoku, kunye neminye imihlobiso emele izimbo zexesha elizayo. Gcina ukhumbula ukuba ngekhe kubekhona isixa esigqithisileyo sokubonelela njengoko oku kuya kunciphisa indawo yomoya kunye nemfuno yendoda ka-Aquarius yokuziva ukhululekile kwiindawo ezivulekileyo.
Ikhaya liya kuba neziqwenga ezimbalwa zobugcisa apha okanye phaya, ngezihombiso ezithile ezingaqhelekanga kwaye kungekudala uza kubona ukuba i-eccentric Aquarius njengeliso lokungaqhelekanga. Inye into umntu wakho aya kucaca ngayo luhlobo lwempahla kunye nokuhonjiswa akuthandayo, kwaye kule meko, uyakungqina ukuba ubhetyebhetye kancinci ngokutshintsha ingqondo.
Ngelixa uhlala evulekile engqondweni, xa kufikwa 'kwitempile' yakhe uya esiba ngqongqo ngakumbi ekucingeni kwakhe. Umzekelo, ukuba phambili kunye nokucinga okuqhubela phambili, unokulindela ukuba indoda eyi-Aquarius ifune zonke izixhobo zegadi kunye nemigqaliselo yommandla wasekhitshini. Zizo zodwa izixhobo zombane kunye nezinto ezimangalisayo zeteknoloji eziya kwenza! Khetha izixhobo zensimbi ezingenasici xa uthengela i-Aquarius eyindoda, njengoko isilivere ingumbala okhethiweyo wendoda yakho.
Umqondiso we-Aquarius ulawula iinkqubo zokujikeleza kwegazi, amathole, amaqatha kunye nemilenze. Kuba lo mqondiso ulawula iinkqubo zokujikeleza kwegazi, kunokuvela imiba ngegazi, kwaye kuya kubaluleka kwindoda ye-Aquarius ukubeka esweni iswekile yegazi, intsimbi kunye nemagnesium. Ukutya okubonelela ngendoda 'ngokutya kwengqondo' kunye nokutya okungafaniyo nokukhuthazwa kokujikeleza kuyacetyiswa.
Ukutya okunezipayisi njengepelepele ye-cayenne kunye nepilisi zilungile egazini nakwibhali, i-oats, ingca yengqolowa kunye nentlanzi kukutya okumnandi kwengqondo.
Ummiselo wokuphefumla kunye nokuzivocavoca njengokuhamba ngebhayisikile, ukuhamba, ukubaleka, okanye nokuthatha inxaxheba kubugcisa bemfazwe kunokunceda iinkqubo zokujikeleza zihlale zikwimeko entle ngelixa besebenzisa ithoni yomzimba kunye nokucoca ingqondo.
Ukuba indoda ye-Aquarius iyagula, eyona ndlela ibhetele yokuchacha ibandakanya ukutshintsha kwendalo esingqongileyo okanye ubuhle bendalo kunye nexesha apho ihlaziya ingqondo. Ngolawulo kwigazi, i-Aquarian inokuthi ifumane imicimbi yezempilo enxulumene nokuhamba kwegazi kwaye ke kufuneka ithathe amanyathelo okuthintela kwaye yenze amanyathelo asempilweni okuthintela ukuqala kweemeko zentliziyo, i-edema yentliziyo, i-arteriosclerosis, kunye nemicimbi enxulumene nokungoneliseki kwemithambo-luvo kubandakanya igazi elingahlambulukanga. , ukwakheka kwemithambo ye-varicose, i-edema yemilenze, kunye neoksijini engafanelekanga.
Khawufane ucinge umfanekiso womntu ophethe amanzi ethwele inqanawa enkulu; kule nqanawa, umntu uya kufumana into ebonakala ngathi linamandla angenasiphelo. Amandla endoda i-Aquarius ayasetyenziswa xa kusenziwa iinzame zemali. Uya kufumanisa ukuba indoda yakho ekrelekrele kwaye intle yomntu waseAquarius ikwanayo nentliziyo enkulu: Eya kuyisebenzisa ukwamkela umhlaba wonke ukuba inako. Kwangelo xesha, ngekhe alindele ukuba uza kufumana nantoni na ngendlela yobabalo.
Entliziyweni yakhe, ufuna ukuba ngumzekeliso kwihashe elimhlophe kuye wonke umntu nakuye nabani na… iqhawe elingena lize lisindise usuku ngomzuzu wokugqibela kwaye lo mnqweno uyabonakala kwimicimbi yoluntu apho azibandakanya khona ngokupheleleyo. Umbonisi, umvelisi, kunye nomntu onengqondo ehlala ebeke kwikamva, ayingafani nendoda ye-Aquarius ukulandela izizathu eziphakamileyo nezinamandla, ke xa kufikwa kumba wezemali, esona sizathu sokuba kubaluleke kakhulu kukuba indlela eya esiphelweni, kwaye uya kuyichitha kwimisebenzi yoluntu.
Amadoda ama-Aquarian aqhelekileyo asebenziseka xa kufikwa kulawulo lwezemali: Abachithi mali ininzi, kwaye benza iinzame ezifanelekileyo zokugcina. Kuyinyani, nangona kunjalo, ukuba indoda ye-Aquarius isokola nokulawula imali kwaye ingafumani mpatho kwimali kwangoko, inokuba isokola kamva ebomini xa izifumana ingakulungelanga ukugula ngesiquphe okanye umhlala phantsi.
Ngokwamakhondo emisebenzi, i-Aquarian inokukhetha kwimisebenzi ebalaseleyo. Imisebenzi apho indoda yase-Aquarius ifaneleke kakuhle, ngakumbi ngenxa yomdla wakhe wokunceda abanye kwaye ngenxa yobuchule bayo bokuyila kunye nezinto ezintsha, zininzi. Eminye imisebenzi efanelekileyo yeAquarius ikwisikhundla sesayensi, isayikholojisti, ifiziksi, ezoluntu, injineli yombane, ugqirha wezonyango, ummeli webandla, ukufota, utitshala, umphilisa ngokholo, kunye nesazi ngeenkwenkwezi, phakathi kwabanye. Indoda eyindoda ye-Aquarius isenokuba ngumqambi omangalisayo.
Amadoda ase-Aquarian anokuthanda abantu bokwenyani ukubonisa ubungqina bakho kunye nokunyaniseka linyathelo lokuqala ekuphumeleleni intliziyo yakhe. Sukuzenza into ongeyiyo kuba i-Aquarian ekrelekrele nesilumkileyo iya kuba nakho ukubona ngqo kwimaski oyinxibileyo. Makhe akubone kwaye akuxabise njengoko unjalo. Kwangelo xesha, musa ukuzinikela ngokwakho kwiintlanganiso ezimbalwa zokuqala… isuntswana elithile eliyimfihlakalo liyabizelwa apha njengoko oku ngokuqinisekileyo kuya kubangela umdla wakhe wokufunda ngakumbi ngawe. Ukunyaniseka akuthethi ukuba kufuneka utyhile konke, kwaye enyanisweni, ukuba ungangqina ukuba ungumntu wangasese kakhulu, nako oku kuya kubonisa ukuba uyamtsala.
Musa ukuchitha ixesha ukwenza iimvakalelo zakho zaziwe. Xa ufumana ithuba lokuziveza, uze ulibambe, kodwa wenze ngasese. I-Aquarian ayizithandi kakhulu iziboniso zoluntu. Cinga ngemida yakho xa unxibelelana naye kuba ayibonisi uthando kwaye awufuni ukuba azive enqabile. Zilungiselele ukuba ngumdlalo wobukrelekrele kuye, kwaye ube nengqondo evulekileyo malunga nokuthandana kunye nezinto zokwenza kunye: Oku kuyakujongana nemfuno yakhe yamava amatsha kunye nomnqweno wakhe wokuzibandakanya kwiincoko ezinobukrelekrele.
Ngengqondo evulekileyo ka-Aquarius, zininzi izinto oya kufumanisa ukuba uyazonwabela. Gcina engqondweni umnqweno we-Aquarian wokufunda izinto ezintsha kunye nomnqweno wakhe wokufuna ukwazi; uyakufumanisa ukuba uya kwamkela ngokucacileyo izimvo ezintsha kunye namava. Indoda yakho yase-Aquarian iyakonwabela uncwadi, ubugcisa, umculo kunye nokuhamba. Uthanda ukonwabela ukuchitha ixesha nabantu abathanda izinto ezifanayo kodwa akonwabele nexesha lakhe lokuphumla. Ungumfundi onobunkunkqele oxabisa ukhetho olubanzi lweentlobo, kwaye ngaphezulu kokukhona othanda intsomi yesayensi kunye neentsomi ezizayo. Indoda eyindoda ingumntu onomdla kwizimanga, ithande ukuhlangana ngokusondeleyo njengeendibano ezinkulu apho anokuhlala khona, kodwa ubukhulu becala uyabuxabisa ubumfihlo.
Ngengqondo yakhe evulekileyo kunye nentliziyo, akukho nzima ukubona indlela indoda yase-Aquarian eya kuthi ifumane abantu abakrwada, abaziphakamisayo, okanye abakhohlakeleyo. Ama-Aquarians, awukhathaleli abo bangakholwayo, abaqhayisayo, abatyhaphazayo, abadlalayo, abakrwada, okanye abathandanayo. Indoda yakho ayikuthandi kakhulu ukubonwa ngabantu, ukuba nemida okanye kuthintelwe nangayiphi na indlela, okanye ngakumbi inelungelo lokukhetha ukuthintelwa. Ukulandela iimfuno zomnye umntu, ngakumbi ukuba wenziwe waziva engaphantsi kwaye iimfuno zingenangqondo, yinto eyenyanyekayo yindoda yase-Aquarian.
Umdlalo oBalaseleyo woMntu weAquarius
Indoda ye-Aquarius ithatha ixesha layo ukuya kubudlelwane, ke nje ukuba ihlale phantsi, inomdla wokunyaniseka kwexesha elide. Kwindima katata, ubonakalisa ukuzibophelela kubantwana bakhe kwaye uthanda ukugqithisa ukuqonda kwakhe, kwaye abantwana bakhe baya kuyonwabela imeko yakhe yokufuna ukwazi ngokulinganayo. Ukufezekisa loo nto, utata wase-Aquarian ufundisa abantwana bakhe ukuba baphonononge.
Ukuqinisekisa ukuba abantwana banemfundo esemagqabini yinto yokuqala nephambili kwi-Aquarian njengoko efuna ukukhuthaza uthando lokufunda ubomi bonke. Ngaloo nto, uya kugqithisa izifundo malunga nendlela yokukhathalela abanye kwaye uya kufundisa abantwana ukubaluleka komsebenzi wobuntu. Lilonke, utata wase-Aquarian unengqondo, uzolile, unomonde kwaye uyakhokela. Uya kukhuthaza ukuzimela kodwa uya kwenza oko ngesikhokelo esiqinileyo kunye neengcebiso.
Njengomntwana, Indoda ye-Aquarius inokuba yindawo enentlalontle kwaye inomdla omkhulu. Umnqweno we-Aquarian unokugqibela ngokumfaka engxakini ngamanye amaxesha, nangona inomdla ongenabungozi, yinto engenamda kwaye engenamida.
Njengentlalontle njengomntu onentlalontle ngokwemvelo, othandekayo, kwaye onomdla, i-Aquarian ayinangxaki yakwenza nabahlobo. Unyanisekile kwaye uyathandeka phakathi koontanga bakhe. Nangona kunjalo, uya kufumanisa ukuba uyalonwabela ixesha lakhe yedwa njengoko echitha ixesha engena nzulu kwiingcinga kunye nemibono. Indoda ye-Aquarius njengomntakwenu kulula ukuba ihambisane nayo, ikakhulu ngenxa yengqondo evulekileyo, intliziyo evulekileyo, kunye nendalo yoluntu. Ubutshaba bomntakwenu, ukuba buvela kwaphela, abuhlali ixesha elide.
Kwezothando, eyona midlalo ilungileyo yendoda ka-Aquarius ziiAries, iGemini, iLibra, kunye neSagittarius. I-Aries kunye ne-Aquarius bayatsala kwinqanaba lomzimba kunye nelokwasengqondweni. Iincoko phakathi kwaba babini ziyintloko kwaye zinokuqhubeka ngonaphakade, zikhonze njengezinto ezinomdla kakhulu kubudlelwane obusondeleyo kamva. I-Aries imalunga nesenzo kunye nokuqhubela phambili, kwaye indoda ye-Aquarius ifana nalo mandla kunye nomnqweno wayo kunye nokucinga kwangaphambili.
I-Gemini kunye ne-Aquarian yabelana ngomnqweno wolwazi kunye nokufunda oya kubagcina benomdla ngonaphakade: Aba babini banokuthi bathethe ngendlela yabo nge-orgasm ukuba bashiywe ukuba bathethe ngokwaneleyo! ILibra kunye neAquarius bobabini banoluvo lokungalingani kunye noluntu olunobungqina bokuzoba omnye komnye, kunye neSagittarius, ngelixa bekhetha izinto ezingasoloko zingahambelani nezinto ezithandwa ngu-Aquarius, isangqina ukuvuselela incoko, ukubandakanyeka, kunye nokutsala Indoda ka-Aquarius.
Indoda ye-Aquarius incinci iyahambelana nezo zilawulwa luphawu lwelanga iScorpio kunye neTaurus. Abanye bathi izinto ezichaseneyo zinomtsalane kwaye ukuba uyakholelwa kuloo nto uyakukholelwa ukuba ikhona indlela yobudlelwane phakathi kweScorpio kunye ne-Aquarian yokusebenza. Nangona kunjalo, iiScorpios ziyasebenza ngakumbi ngokweemvakalelo kune
U-Aquarius, kunye nolwalamano ngokwalo lutyekele kumaza okungaqiniseki. Kuyafana nokuhamba kwengqondo yeTaurus kunye nengqondo ye-Aquarian; bobabini ubuntu bujongana nobomi ngeendlela ezahlukileyo zengqondo, kunye neTaurus ikhululekile kwaye yoyisiwe i-Aquarius iyasebenza, inomdla kwaye inikezela phambili xa inakho. Ezi zinto zimbini zigqithileyo zenza olu hlobo lobudlelwane lungalindeleki.
Nantoni na evuselela ukucinga kwakhe yenza isipho esikhulu. Iincwadi zamva nje ezithengisa kakhulu okanye mhlawumbi ezinye ezakudala ziya kungqina kufanelekile kuba kusenokwenzeka ukuba abe ngumfundi onesidima. Umfundi we-eBook okanye ithebhulethi inokuthi ifaneleke xa ukude ngakumbi kubudlelwane. Isipho kufuneka sisebenze kwaye singabi ngaphezulu kakhulu. Ubuchule, inoveli kunye nezipho ezingaqhelekanga zikwanomtsalane kwingcinga engapheliyo ye-Aquarian. Izipho ezinento esebenzayo aziyi kuxabiswa.
Umqondiso welanga ka-Aquarius uhambelana neentsomi zamaGrike nezamaRoma ezibalisa ibali lolutsha lwaseFrigiya eligama linguGanymede. Ibali lisibonisa ukuba uGanymede, unyana wenkosi yaseTroy okanye iTros, wayeseNtabeni iIda apho wayehlala khona nemihlambi kayise. KwakuseNtabeni i-Ida, uthixo uJupiter wamjonga kwaye uthathwa kakhulu kunye nenkwenkwana. Ejika waba yintaka enkulu edla inyama, uJupiter ubhabhela eNtabeni i-Ida kwaye weba uGanymede, owathi kamva waziwa njengomphathi wendebe yoothixo (umphathi wamanzi).
Ikhadi le-tarot elinxulunyaniswa ne-Aquarius yiNkwenkwezi ebonisa umntu ophethe amanzi ekhadini kunye neenkwenkwezi esibhakabhakeni (ngaloo ndlela ucebisa ngebali likaGanymede owathathwa nguJupiter waya esibhakabhakeni). Inani lekhadi le-Star ngu-XVII. Ke, kubalo lwamanani, oku kwehla ukusuka kwi-17 kuye kwinani lesi-8. Inani u-8 linxulunyaniswa nomjikelezo ongenasiphelo, ongunaphakade, nokuzalwa, ubomi, ukufa kunye nokuzalwa ngokutsha kobomi. Umqondiso we-Aquarius unxulunyaniswa nentliziyo ye-chakra, ehambelana noluntu lwe-Aquarius Man.
Imihla ye-Aquarius: NgoJanuwari 20-Februwari 19
Glyph imvelaphi yegama lokuqala. Umboniso womzimba wamanzi aphazamisekileyo okanye ahambayo.
IsiSanskrit: UKumbha, okuthetha 'uMvuli wamanzi.'
Ibinzana eliphambili: 'Ndiyazi.'
Ulawulo lwe-anatomical: Imilenze, amaqatha, amathole, kunye nenkqubo yokujikeleza kwegazi.
Ingelosi: I-Sakmakrel kunye ne-Archer
Izilwanyana: Fox, Inja, kunye ne-Otter
Iphupha leArchetype: Abaququzeleli / aBavelisi
Umgangatho wokulinganisa: Imvakalelo, imvakalelo kunye nokufudumala
Intaka : Ukhozi
Amatye okuzalwa: Garnet kunye neamethiste
Umthi weCeltic wenyanga: (Birch) Disemba 24-Januwari 20 (Rowan) Januwari 21-Februwari 17
Intsingiselo yoMthi weCeltic: Umphumeleli kunye noCinga
Chakra: Intliziyo (Anahata)
Uphawu lwaseTshayina lweZodiac: Ingwe
Ukuhambelana kothando: I-Aries, iGemini, iLibra, kunye neSagittarius.
Izithixo Zabafazi: Nuit, Athena, kunye noJuno
Ukuphilisa Amakristali: Malachite, Lapis Lazuli, Aquamarine, kunye neAmber.
Amakhambi: Fennel, Buttercup, kunye nomhlonyane.
Ibinzana eliphambili: Ubudlelwane
Izithixo zamadoda: UJupiter, uHapi no-Uranus
Isinyithi: IAluminiyam, iUranium, kunye neNkokeli
Isandi soMculo: E ngasentla C
Inani lokungcangcazela: 4
Oyile: Umhlonyane, uValerian, uPoppy, uPine, iMbewu yeFlakisi, uFennel, uDaffodil noComfrey.
Impembelelo kwiplanethi: ISaturn (yamandulo), i-Uranus (yangoku)
Imibala yokuqala: Umbane oluhlaza okwesibhakabhaka, o-pinki oqaqambileyo, ongwevu, umbala ohlaza okwesibhakabhaka
Imibala yesibini: Shimmery luhlaza
yeyiphi imiqondiso inyanga ekhoyo ngoku
Isidingo saseprayimari: Ukuzisa entsha kunye nokwazi
Ivumba: Ibhotolo, iComfrey, iDaffodil, iFennel, iMbewu yeFlakisi, iPoppy, iWormwood, iValerian kunye nePine.
Umbutho wamaxesha: Ubusika
Imibutho yeTarot Card: Inkwenkwezi (XVII)
Imithi: IMyrtle, iCherry, iAsh, kunye neAlmond
Abantu abadumileyo: UAston Kutcher, uChristian Bale, uMichael Jordan, uAdam Lambert, uBob Marley kunye noCristiano Ronaldo.
umbala oluhlaza ufuzisela ntoni
umhlaza indoda yomhlaza umfazi ebhedini
capricorn umfazi kunye ne-libra indoda ngesondo